10 Ihe nkiri Academy na -awụ akpata oyi n'ahụ na -emeri ihe nkiri - Ntụrụndụ
Ihe nkiri iri ị gaghị ekwere na ọ nwetara nzere Academy
Ọ dị mma, ndị enyi: Ọ bụ ngwụcha ngwụcha Academy Awards, nke pụtara na anyị ga -enwe ihe ọkụkụ ọhụrụ nke ndị mmeri iji mee ememme na ndị furu efu ịkwa ákwá na -abịa n'abalị Sọnde. Mana ewezuga ịnwa ịkọwa amụma m kachasị mma maka afọ a, ngwụsị izu a bụkwa oge kacha mma m ga -echetara ndị mmeri kachasị amasị m site na afọ gara aga - nke na -ebute echiche ozugbo na fim ihe nkiri. Titanic , Ifufe Gara , na Akụkọ Akụkụ West (opekata mpe, maka m). Mana dị ka enwere ọnụnọ Oscar na ndị mmeri dị ukwuu, a na -enwekwa fim ndị na -enweghị usoro nke nwetara prefix 'Academy Award winner ...'. Agara m n'ime afọ 86 nke emume agụmakwụkwọ Academy, ndị a bụ 10 nke nwetara ntuli anya kacha elu n'aka m.
8 Maịl ___
Ọ were nnukwu ọrụ (pun zubere) iji tụgharịa Eddie Murphy ka ọ bụrụ Prọfesọ Sherman Klump (yana mkpụrụedemede isii ndị ọzọ ọ rụrụ na fim ahụ) - nke mere na Mahadum matara ya na 1996 maka etemeete kacha mma.
Ee, ihe nkiri banyere ezì na -ekwu okwu. Ọ mara mma? Kpomkwem. Ọ kwesịrị Asaa Nhọpụta Oscar, gụnyere otu maka Foto kacha mma? Ehhhh. O mechara were otu maka nsonaazụ kacha mma na 1996.
Enwetara m ya: iweta dinosaurs na ndụ ọlaọcha abụghị ọrụ dị mfe, ọ nwetara Spielberg & Co. atọ Academy Awards na 1994: Ndezi ụda kacha mma, ngwakọta ụda kacha mma (ndị niile mkpọtụ emeghị onwe ha), na Mmetụta Anya kacha mma.
Franye kpụrụ Roger Rabbit?
Ọ dị onye ọ bụla ọzọ juru anya dịka m si hụ na a họpụtara egwu egwu a shark maka Foto kacha mma ? O merighị, mana ọ bụ egwu 'baaaa-dom' kpochapụrụ ụda ụda na 1976.
Gee ntị, ama m na ihe nkiri Sylvester Stallone a bụ ihe ama ama. Ahụrụ m ya n'anya dịka onye ọzọ. Mana ọ nabatara 10 Oscar nods na 1977, wee tie ya ihe Ndị nwoke niile nke Onye isi ala maka Foto kacha mma na onye ntụzi kacha mma. Ndo, Sly, mana aga m eso duo Redford-Hoffman oge ọ bụla.
__ Kedụ mmeri ihe nkiri wụrụ gị akpata oyi n'ahụ?
ezigbo osisi na egbugbu egbugbu
otu esi eme ka ntutu gị dị mma ma too
onyinye efu maka ndị ọrụ ahụike
otú na -eyi a efe ara na a halter n'elu